Namastesansar | अब फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने ! - Namastesansar अब फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने ! - Namastesansar
होमपेज » मुख्य खबर » अब फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने !
प्रकाशित मिति: २०७७/ १/ २७/ शनिवार
लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने नियम लागु भइसकेपछि फेसबुक लाइभमा आउने कलाकारहरूले अर्थोपार्जन गर्न सक्नेछन् । लाइभ भिडियोमा शुल्कको व्यवस्था लागु गर्नका लागि फेसबुकले एक नयाँ फिचर थप गर्नेछ । जसअनुसार फेसबुक लाइभ गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाइभमा आउनुअघि नै आफ्नो लाइभ भिडियो अरूलाई नि:शुल्क रुपमा देखाउने कि स:शुल्क बनाउने भन्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।
डोनेट बटनमार्फत् संकलित शतप्रतिशत रकम नै फेसबुकले गैरनाफामूलक संस्थाहरूको खातामा जम्मा गरिदिने छ। फेसबुकले लाइभ भिडियो हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने नियम आगामी केही हप्ताबाटै लागु गर्नसक्ने बताइएको छ । यद्यपि उसले यो नयाँ फिचर सुरु हुने मितिचाहिँ तोकेको छैन ।
भिडियो गेम खेलाडीहरूका लागि विशेष रुपमा तयार गरिएको उक्त स्ट्रिमिङ प्लाटर्फममा फेसबुक प्रयोगकर्ताले कुनै पनि भिडियो खेलाडीको स्ट्रिममा रकम दान गर्न सक्दछन् ।
आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको बेलायती प्रधानमन्त्रीबाट बचाउ
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणः विश्वभरि कोभिड-१९ पुष्टि भएको सङ्ख्या ५० लाख नाघ्यो